Ctionlọ ndị na-ere ahịa Breker na-ewelite $ 132.000 maka Apple I | Esi m mac
Obi abụọ adịghị ya, site n'ụlọ okushon n'onwe ya, a na-emetụ ha aka mgbe ọnụahịa a nwetara maka kọmputa Apple a dị egwu, bụ nke ole na ole ka na-arụ ọrụ taa. N'ezie, ụlọ a na-ere ahịa erela ọtụtụ n'ime ndị otu a na ihe dịka afọ 4 gara aga otu ọzọ nwere njirimara yiri ya ruru euro 246.000, ọnụọgụ dị mkpa karịa ma nke dịkwa anya site na ego karịrị nke otu n'ime 'mpempe' a nwetara Akụkọ Apple nke Steve Jobs na Steve Wozniak kere, nke nwetara ego kachasị elu kwụrụ ụgwọ na mkpirisi $ 671.000.
Na agbanyeghị auction nke a mbụ onye kọmputa kere Apple ke mbubreyo 70s Enwetabeghị ego dị otú ahụ ma ọ bụrụ na anyị echebara ire ere nke ìgwè ndị a n'afọ ndị ahụ anya, okwu a bụ na ugbu a ndị a, m bụ Apple m bụ ezigbo ndị na-achịkọta ihe ma ọ bụ ihe ijuanya na anaghị eresị ya ọnụ ọgụgụ ka elu.
Mkpokọta nke kwụsịrị ụbọchị ole na ole gara aga gbakwunyere akụrụngwa Apple a na akwụkwọ nkwado ya dabara adaba, akwụkwọ ntuziaka nke Apple gbakwunyere na ha na akwụkwọ mbụ ndị ọzọ nwere ike ibuli ọnụahịa Apple m na ọnụ ọgụgụ dị egwu, mana oge a enweghị dị ka nke ahụ ma debe euro 110.000. Dị ka nkwupụta mgbe okushon nke Uwe Breker, onye isi ụlọ ụlọ ahịa a kwuru, ahịhịa ndị otu a "ahaziri" ma n'ihi nke a ha enwebeghị ike iru ọnụ ọgụgụ nke oge gara aga n'agbanyeghị na ha bụ ndị otu akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ Cupertino.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ctionlọ ndị na-ere ahịa Breker na-ewelite $ 132.000 maka Apple I
Egwu Apple enweghịzị nnwere onwe maka ọnwa 3 izizi ga-efu € 0.99